WakuWaku Japan - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ (အင်ဒိုနီးရှား)
ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၄ (မြန်မာ)
ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၅ (စင်ကာပူ)
မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၆ (ထိုင်း)
စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၆ (ထိုင်ဝမ်)
အောက်တိုဘာ ၇၊ ၂၀၁၆ (သီရိလင်္ကာ)
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ (မွန်ဂိုးလီးယား)
ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ (ဗီယက်နမ်)
576i SDTV 16:9)
"Experience the Real Japan"
အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မန်ဒါရင်၊ ထိုင်း
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ
ကိုတို၊ တိုကျိုမြို့၊ ဂျပန်နိုင်ငံ
MNC Vision (အင်ဒိုနီးရှား)
Channel 209 (Ku-band)
Channel 1209 (C-band)
Channel 388 (HD) (မကြာမီ)
Channel 129 (Selection Cable Provider)
New Taipei City Cable TV
Channel 616 (မလေး) (HD)
Channel 520 (မန်ဒါရင်) (HD)
Channel 268 (အင်္ဂလိပ်) (HD)
TWM Broadband (ထိုင်ဝမ်)
CHT MOD (ထိုင်ဝမ်)
WakuWaku Japan ရုပ်သံလိုင်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အာရှတစ်ခွင်သို့ နေ့စဉ် ၂၄ နာရီထုတ်လွှင့်ပေးနေသော ဖျော်ဖြေရေးရုပ်သံ အမျိုးအစား အခပေးရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန် ရုပ်သံအစီအစဉ်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ၊ မလေးဘာသာ ၊ မွန်ဂိုးလီးယားဘာသာ တို့ဖြင့်လည်း ထုတ်လွှင့်နေသည်။ နိုင်ငံအလိုက် ၎င်းတို့၏ မိခင်ဘာသာစကားတို့ဖြင့် စာတန်းထိုးပြသခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံအချို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
WakuWaku (ワクワク) ဆိုသည်မှာ " စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်" " တက်ကြွဖွယ်" " နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းဖွယ် " စသည့်ဖြင့် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရသည် အဆိုပါရုပ်သံလိုင်း အတွက် ယန်းငွေ ၁၅.၅ ဘီလီယံ အကုန်အကျခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ တွင် ၎င်း၏ ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်သော WakuWaku Japan Music Festival ဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် တရားဝင် စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ သို့သော် စတင်ထုတ်လွှင့်ရာတွင် တစ်နေ့လျှင် ၁၂ နာရီစာ အစီအစဉ်များ ပြန်လှန်ပြသခြင်းစနစ်ဖြင့် သာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင်ထုတ်လွှင့်ချိန်တွင် နေ့စဉ် ၂၄ နာရီ စနစ်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင် Indovision နှင့် OkeVision တွင်သာ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် OrangeTV နှင့် BiG TV တို့တွင် တိုးချဲ့ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း တရားဝင် စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး 4TV ၌ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။
WakuWaku Japan ရုပ်သံလိုင်း သည် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အင်နီမေးရှင်း ကာတွန်းများ၊ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ ရုပ်ရှင် နှင့် အားကစား အစီအစဉ်များ၊ ဂီတအစီအစဉ်များ၊ ဂျပန်အစားအစာ နှင့် ခရီးသွားအစီအစဉ်များ ကို ထုတ်လွှင့်နေသည်။
Music Japan TV (2014-2017)
WakuWaku Kids (2015-2016)
J.League Goal Highlights (2015-2016)
WakuWaku Football Academy (2015-2016)
Shiki-Oriori: Japan Food & Festival (2015-2017)
Quiz Surprise!! Japan (Indonesia and Myanmar only) (2015-2016)
Catch Your Dream! –Study in Japan- (2017)
The Asian Judge (also on CNN Malaysia) (2016)
Tokyo Doki Doki Campus LIFE (2016)
The Wonder Japan -Takumi- (also on CNN Malaysia) (2015)
Dream of Red & White Samurai (Indonesia only) (2015)
↑ Japanese TV Program Channel WakuWaku Japan is Ready to Air This Month။ Duniaku Network (February 10, 2014)။
↑ Indonesian Lineup of Broadcast Platforms providing WakuWaku Japan Channel of Japanese Programming for Overseas Broadcast Expanded – Broadcast on Four Pay TV Services to Start on Sunday, June 1။ Sky Perfect JSAT Corporation (May 29, 2014)။
↑ Myanmar | How to Watch | WAKUWAKU JAPAN[လင့်ခ်သေ]
↑ Projects Report Vol.3| Our Practice | Cool Japan Fund။ 29 June 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=WakuWaku_Japan&oldid=645923" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။